सावधान ! बच्चालाई चुम्बन गर्नु प्राणघातक हुनसक्छ
एजेन्सी । स-साना बालबालिकालाई हेर्दा जो कोहीलाई पनि मायाले चुम्बन गर्न मन लाग्छ । भर्खरका कलिला बच्चा मन नपर्ने को हुन्छ र ? तर के तपाईलाई थाहा छ तपाईले मायापूर्वक गरेको चुम्बन त्यस बच्चाका लागि प्राणघातक समेत हुन सक्छ । यस्ता साना कुराले पनि नाजुक बालबालिकालाई असर गर्ने हुनाले हामीले धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । अमेरिकाको एक जोडी पनि आफ्नो लापरबाहीका कारण यस्तै दुर्घटनामा परेको छ ।
अमेरिकाको लोवामा एक जोडीको घरमा छोरीले जन्म लिएपछि उनीहरुको खुसीको सिमा रहेन । तर, भर्खरै मात्र आफ्नो छोरीलाई जन्म दिएकी निकोलले सपनामा पनि सोचकी थिइनन् होला कि उनले आफ्नो बच्चालाई यस्तो कारणले गुमाउनु पर्नेछ ।
त्यसपछि मारियानाको हालत झनझन् बिग्रँदै गयो । उनलाई श्वास लिन निकै गाह्रो भइरहेको थियो । इन्फेक्सनका कारण उनको शरिरभित्र रगत थामिन छाड्यो र आखिरमा उनको किड्नी, लिभर हुँदै दिमागले काम गर्न छाड्यो । जम्मा १८ दिनकी मारियानालाई चिकित्सकले मृत घोषित गरिदिए । यस दुखद् घटनाले मारियानाको आमाबाबुलाई स्तब्ध बनायो । सानो लापरवाहीका कारण आफ्नी १८ महिने छोरी गुमाउनु परेपछि उनीहरु अहिले पछुताइरहेका छन् ।